Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra
"1 Ary rehefa ren’i Adoni-zedeka, mpanjakan’i Jerosalema, fa afak’i Josoa Ay ka noravany (fa araka izay nataony tamin’i Jeriko sy ny mpanjakany no nataony tamin’Ay sy ny mpanjakany), sady nanao fihavanana tamin’ny Isiraely ny mponina tany Gibeona ka tomoetra eo aminy, 2 dia raiki-tahotra indrindra izy, satria tanàna lehibe Gibeona tahaka ny anankiray amin’ny tanàna misy andriana, sady lehibe noho Ay, ary nahery ny lehilahy rehetra teo. 3 Dia naniraka olona Adoni-zedeka, mpanjakan’i Jerosalema, ho any amin’i Hohama mpanjakan’i Hebrona, sy Pirama, mpanjakan’i Jarmota, sy Jafia, mpanjakan’i Lakisy, ary Debira, mpanjakan’i Eglona, ka nanao hoe: 4 Miakara at? amiko, ka manampia ahy, hamelezantsika an’i Gibeona; fa efa nanao fihavanana tamin’i Josoa sy ny Zanak’Isiraely izy. 5 Dia niangona ireo mpanjaka dimy tamin’ny Amorita ireo, dia ny mpanjakan’i Jerosalema, ny mpanjakan’i Hebrona, ny mpanjakan’i Jarmota, ny mpanjakan’i Lakisy, ary ny mpanjakan’i Eglona, ka niakatra izy sy ny miaramilany rehetra, ary nitoby tandrifin’i Gibeona ka namely azy. 6 Ary ny mponina tao Gibeona dia naniraka olona ho any amin’i Josoa teo an-toby tany Gilgala hanao hoe: Aza mampiketraka ny tananao tsy hamonjy ny mpanomponao; miakara faingana ho at? aminay, ary vonjeo sy ampio izahay; fa miangona hamely anay ny mpanjaka rehetra amin’ny Amorita izay monina any amin’ny tany havoana. 7 Dia niakatra niala tany Gilgala Josoa sy ny mpanafika rehetra teo aminy, dia ny lehilahy mahery rehetra. 8 Ary hoy Jehovah tamin’i Josoa: Aza matahotra azy, fa efa natolotra eo an-tananao izy, ka tsy hisy hahajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. 9 Ary tonga tampoka tamin’ireo Josoa; fa nanao lava alina-avy tany Gilgala izy. 10 Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo anoloan’ny Isiraely; ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty maro be, sady nanenjika azy tamin’ny fiakarana mankany Beti-horona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. 11 Ary nony nandositra teo anoloan’ny Isiraely teo am-pidinan’i Beti-horona izy, Jehovah dia nandatsaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy; ary be lavitra ny matin’ny havandra noho izay novonoin’ny Zanak’Isiraely tamin’ny sabatra. 12 Ary tamin’izany Josoa dia niteny tamin’i Jehovah tamin’ny andro nanoloran’i Jehovah ny Amorita teo anoloan’ny Zanak’Isiraely ka nanao teo imason’ny Zanak’Isiraely hoe: Ry masoandro, mijanòna eo ambonin’i Gibeona; Ary, hianao kosa, ry volana, any an-dohasahan’i Aialona. 13 Dia nijanona ny masoandro, ary nijanona koa ny volana, Mandra-pamalin’ny olona ny fahavalony. Tsy efa voasoratra eo amin’ny Bokin’i Jasara va izany? Dia nijanona teo afovoan’ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso hilentika tokony ho indray andro maninjitra. 14 Ary tsy nisy andro tahaka izany, na tany alohany, na tato aoriany, izay nihainoan’i Jehovah ny feon’olona; fa Jehovah niady ho an’ny Isiraely. 15 Ary Josoa sy ny Isiraely rehetra dia niverina nankany an-toby tany Gilgala. 16 Ary nandositra ny mpanjaka dimy ka niery tao anatin’ilay zohy any Makeda. 17 Dia nolazaina tamin’i Josoa hoe: Indreo, miery ao anatin’ilay zohy any Makeda ny mpanjaka dimy. 18 Ary hoy Josoa: Manakodiava vato lehibe hatampina ny vavan’ny zohy, ary asio olona eo anoloany hiambina azy; 19 fa hianareo aza mijanona, fa manenjeha ny fahavalonareo, ka mameleza ny vodi-làlana; aza avela ho tafiditra any an-tanànany ireny, fa efa natolotr’i Jehovah Andriamanitrareo eo an-tànanareo. 20 Ary rehefa voaringan’i Josoa sy ny Zanak’Isiraely mihitsy ireny mandra-pahalany ritrany, ka izay afa-nandositra no lasa niditra tany amin’ny tanàna mimanda, 21 dia niverina soa aman-tsara ho any amin’i Josoa teo an-toby tany Makeda ny vahoaka rehetra; ary tsy nisy sahy nanao vava ratsy tamin’ny Zanak’Isiraely intsony." Josoa 10:1-21
Miray hina ny fahavalo (1-5). Raiki-tahotra ny mpanjakan’i Jerosalema raha nahare fa ravan’ny Zanak’Israely i Ay sy Jeriko izay tanàn-dehibe. Nihombo ny fanahiany ny amin’i Gibeonita izay nanao fanekem-pihavanana tamin’ny Zanak’Israely (1-2). Nanapakevitra izy hiady amin’ireo izay lasa fahavalony noho ny fifanarahany amin’ny Zanak’Israely. Niantso ireo mpanjaka dimy manodidina izy hiaraka aminy hanafika an’i Gibeona (3-5). Miray hina, manambatra hery ny fahavalo hamelezana izay miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra.
Fanontaniana: Aiza ho aiza kosa ankehitriny ny firaisan-kina, firaisan-tsaina, firaisam-po, fiaraha-mientana, fifanka-tiavana, fifanomezan-tanana eo amin’ny fiangonanan’Andriamanitra amin’ny fito-riana ny Filazantsara? (Filipianina 2:2).
Fanavotana ny Gibeonita (6-8). Tsy nisalasala niantso ny Zanak’Israely hanampy azy amin’ny ady atrehiny ny Gibeonita noho ny fanekena nifanaovana. Lasa adin’ny Zanak’Israely izao ny adiny. Niainga namonjy ny Gibeonita ny Zanak’Israely ka nahazo fampaherezana tamin’Andriamanitra (8). Momba ny olony tokoa Andriamanitra: “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho.” (Isaia 41:10).
An’Andriamanitra ny ady (9-21). Namely tampoka ny fahavalo ny Zanak’Israely. Niditra an-tsehatra koa Andriamanitra nampiasa ny heriny mahagaga nampifanaritaka ny fahavalo (10), nandatsaka havandra vaventy (11) nanajanona ny masoandro tsy hihetsika mba handripahana azy ireo (13). Nandositra ireo mpanjaka dimy, ringana ny fahavalo, tsy nisy sahy niteny ratsy ny Zanak’Israely intsony.
Saintsaino: Tsy ampy ve izay ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra manoloana ny ady atrehina isan’andro; tsy aleo miandany Aminy sy mametraka ny ady rehetra Aminy fa Izy no hiady ho antsika?